Tetikasa - Guangzhou Beyond Lighting Co., voafetra
2021 YuNan A.rt Pfananganana endrika
100 sombi-bokatra 1940Z (19 * 40W manasa loha manetsika zoom) niasa tamin'ity hetsika fampisehoana ity ary nahazo dera maro avy amin'ireo mpihaino sy mpamorona jiro. Gaga ny olona tamin'ny fahaizany mampifangaro loko sy ny famirapiratany ary mahatalanjona amin'ny fiasa mangina ataony. Amin'ny loha 760 Watts manasa loha, dia mbola milamina ihany ny miasa amin'ity teatra ity.
Loharano maivana: 19x40W RGBW 4-in-1 Led
Zoro zoro: 6.5 ° -45 °
Mode DMX: 19/27 Ch
Napetraka ny hook hook
LED 3 vokarin'ny peratra
Ny fankalazana ny faha-100 taonan'ny China Aerospace Science and Technology Corporation
Ny loha mihetsiketsiky ny tantely 7x60W dia tena malaza amin'ny fampihetseham-batana rehetra, ity fankalazana ity dia mitentina 150 piraso 760 hanampiana ity dingana ity fampisehoana sy vokany mahafinaritra.
2021 <The Treasured Voice> Fandaharana TV
Is dia fandaharana amin'ny fahitalavitra mafana iray any Shina tamin'ny 2021. Ao anatin'ity programa ity dia mitady ny antsasaky ny mozika ireo mpiara-miasa mozika. Isaky ny vanim-potoana dia misy mpiara-miasa manidina enina miara-miasa hihira tsiroaroa. Ny iray amin'izy ireo sy ireo mpitendry zavamaneno dia miara-miasa hiara-mihira hira volamena iray, ary manatanteraka ny "fifaninanana ho an'ny hira volamena voatondro"
2021 Fetin'ny mozika ho avy Sichuan
Fetiben'ny mozika ho avy Sichuan Future natao indray mandeha isan-taona, tamin'ity taona ity, 120 sombin-tantely 19x40w loha mihetsiketsika avy any ankoatry ny jiro voafantina ho an'ity hetsika ity.
24 * 60W Ny loha mihetsiketsika maso dia mihoatra ny hazavana amin'ny vokatra vaovao 2021, ny Sinoa Yunnan Grand Theatre dia nanome baiko 100 ho vonona amin'ny tantara an-tsehatra. Araka ny nolazain'ilay vahiny dia hazavana iray no mitazona ny sehatry ny lalao rehetra. Mampiseho izany fa io hazavana io dia tena mamirapiratra tokoa!
Loharano maivana: 24 * 60W 4in1 RGBW Led
Ny zoro: 3.5 ° -45 °
Ny fanjifana herinaratra dia 1500W
Ny Led tsirairay dia voafehy tokana ary tsara ny fihenan-tsofina ary tsy misy flicker
Mandritra ny ankehitriny, ny herinaratra mahery, ny fiarovana ny hafanana
Ny fampahalalana momba ny asa maivana dia azo vakiana amin'ny menio
Dimenison dia 354 * 444 * 477mm ary milanja 25 kg
Expo Indostria Big Data Indostria Sina
Ny lanonam-panokafana ny Lalao Chongqing faha-6
2021 Xi 'Expo môtô